Isku aadka kooxaha isku soo haray - BBC Somali
Isku aadka kooxaha isku soo haray
26 Juunyo 2010
Image caption South Africa, 2010
Tartanka koobka adduunka ee ka socda dalka Konfur Africa waxaa uu galay marxaladda labaad kaddib markii wareegyadii isreebreebka oo ka koobnaa sideed guruub oo ey ka qeybgaleen 32 koxood, ey ka soo hareen 16 kooxood.
Wareega cusub waa mid isreebreebkiisa toos yahay oo labo labo la isugu diraayo kooxaha, oo tii laga badiyaa ey tartanka ka hari doonto.
16aka kooxood ee isugu soo haray marxaladda labaad waxa ey isugu soo aadeen sidatan:
Maanta oo wareega labaad bilaabanayo waxaa qorsheysan labo ciyaar.
Kulanka hore waxa galabtay uu ka dhacayaa saacadda Bariga Afrika marka ey tahay shan galabnimo gegida Nelson Mandela Bay Stadium ee magaalada Port Elisabeth. Waxaana kulamaya Urugay iyo konfur korea.
Ciyaarta kale waxaa ey dhici doonta sagaalka iyo barka habeenimo saacadda Geeska Afrika. Waxaana gegida Royal Bafokeng Stadium eeku taal magaalada Rustenburg isku arki doona Ghana iyo Mareekanka.
Ghana waa kooxda kaliya ee mathaleysa qaaradda Afrika, kaddib markii ey wada hareen shanti koox ee kale oo lagu reebay wareegga kowaad oo kala ah Konfur Afrika oo martigalineysa ciyaaraaha koobka adduunka, Nigeria, Camerun, Algeria iyo Ivory Coast.
Sidaasi darteed culeys weyn, ayaa saaraan Ghana, maxaa yeelay Afrika oo dhan ayaa isha ku haysa oo ka fileysa natiijo fiican inay gaarto ciyaaraha.